Kaguya Sama Season 3 Taariikhda Siideynta + Jilayaasha Cusub - Muuqaalka Cradle
Leave a Comment on Kaguya Sama Season 3 Taariikhda Siideynta + Jilayaasha Cusub
Kaguya Sama waa la jecel yahay Anime jaceylka kaas oo asal ahaan soo baxay 2019. Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa wax kasta oo ku lug leh Kaguya Sama Season 3. Kaguya Sama wuxuu lahaa sheeko xiiso badan oo lagu bilaabayo laakiin xilli ciyaareedkii labaad wuxuu bilaabay inuu sii yaraanayo iyo saamayntan marka la eego sida sheekada ugu weyn iyo qaybaha kala duwan ay isu dhigmaan. Sheekadu waxay ku saabsan tahay ilaa 2 arday oo kan kale jecel laakiin aad uga baqaya inay midba midka kale u qirto.
Kaguya Sama Love Is Warsheekadu aad bay u toosan tahay oo aad bay u fududdahay, in la yidhaahdo. Nasiib darro, tani waxay keeni kartaa oo keeni kartaa dhibaatooyin qaarkood hadhow oo aan geli doono. Mawduuca ugu muhiimsan ee sheekadu waxay sidoo kale joogi doontaa Kaguya Sama Season 3 sababtan awgeed.
Taxanuhu wuxuu inta badan ku tiirsan yahay xeeladaha iyo xeeladaha uu jile kasta (labada jilaa kaliya) adeegsadaan, waana meesha inta badan sheekada iyo firfircoonida ay ka soo galaan. Kaguya Shinomiya & Miyuki Shiragane Labaduba waa (ma yaabin) golaha ardayda, Shirgaane isagoo ah guddoomiyaha golaha.
Jilayaasha ugu muhiimsan ee Kaguya Sama
Marka hore, waxaan leenahay Miyuki Shiragane waa kuma gudoomiyaha golaha, xagee Shinomiya sidoo kale waa arday. Waa dheer yahay, qurux badan oo indho buluug ah iyo timo cad. Wuxuu isku dayaa inuu u dhaqmo si qabow oo kalsooni leh laakiin sida caadiga ah wuu ku guuldareystaa habka. Waxaa hubaal ah in madaxweynaha uu ka soo muuqan doono Kaguya Sama Season 3.
Tani, fikradeyda, waxay ka dhigaysaa dabeecad wanaagsan, sida qolofkiisa dibadda ah ama muuqaalkiisa ayaa isku dhacaya gudaha gudaha, abuurista firfircooni wanaagsan ee habka. Waxa uu xidhan yahay golaha ardayda dirays madow.
Marka xigta, waxaan leenahay Kaguya Shinomiya, madaxweyne ku xigeenka. Waxay u dhaqmaysaa si la mid ah sideedii Shirgaane, isku dayaya in ay ku ilaashadaan degenaansho been abuur ah oo kalsooni iyo qaboow inta ay la dagaalamayaan nafahooda gudaha. Caadi ahaan waa mid rasmi ah laakiin sidoo kale xishood badan isla mar ahaantaana, iyada oo ah dhaxalka nasiibka xun si kastaba ha ahaatee, dabeecadeeda tahriibka ah ayaa mararka qaarkood soo dhex mara.
3aad waa Chika Fujiwara xubin kale oo ka tirsan guddiga ardayda. Haddaan si sax ah u xasuusto waxay ahayd xoghayaha guddiga ardayda. Hal shay oo aan hubo ayaa ah in aanan waligey iyada u yeelan doonin xoghayn. Waxay leedahay cod dhibsado, timo casaan ah, iyo indho buluug ah. Iyadu waa celcelis dherer waxayna u dhistaa ardayda caadiga ah ee Dugsiga Sare.
Ugu dambeyntii, waxaan haynaa Yu Ishigami, Yaa buuxiya trope dabeecadda ilmaha ee aamusnaanta ah oo aan necbahay isaga oo la socda bilowgii. Waxa uu leeyahay dabeecad gacmeed quruxsan oo aan si dhab ah loo ballaarin ama aan la siin nooc kasta oo qoto dheer ilaa qaybaha dambe ee 2 Season.
Aad buu u dheer yahay, oo leh timo madow oo dhaadheer oo daboolaya mid ka mid ah indhihiisa. Sidan oo kale waxa uu had iyo jeer u muuqdaa in qaar ka mid ah taleefoonnada gacanta ay qoorta ugu xidhan yihiin, marka laga reebo in run ahaantii aanay jirin wax badan oo isaga ku saabsan. Dabeecaddiisa ayaa laga dhigay inuu khilaafo Fujiwara halka Shirgaane iyo Shinomiya firfircooni wuu shaqaynayaa.
Jilayaasha hoose ee Kaguya Sama
Xarfaha-hoose ee Kaguya Sama Love Is War dhamaantood si fiican ayay shaqadooda u qabteen mana jiraan wax badan oo aan xumaan ka sheegi karo iyaga. Dhammaantood waxay sameeyaan wixii ay ahayd inay sameeyaan, midkoodna ma dareemin wax caadi ah. Jilayaashan oo dhan waxay ka dhigi doonaan muuqaalka Kaguya Sama Season 3. Iyadoo la sheegay in, iyagu ma ay ahaayeen kuwo aad u xiiso leh sidoo kale, wax gaar ah ma aha, laakiin taasi run ahaantii ma aha diiradda ugu weyn ee show si kastaba, halkan magacooda.
Jilayaasha hoose ee Kaguya Sama! Jacaylku waa dagaal!
Ma jiri doona Kaguya Sama Season 3?
Taxanaha manga ee uu qoray Aka Akasaka (halka uu animegu ku saleysan yahay) ayaa sidoo kale ku raaxaysanaya caan la mid ah waana manga-ga sagaalaad ee ugu iibinta badan sanadka 2019, iyadoo in ka badan 4 milyan oo nuqul la iibiyay. Sidaa darteed, sida aad arki karto rabitaanka Manga ayaa durba aad u sarreeya waxayna abuurtay dareen badan intii lagu jiray waqtiga uu maqnaa.
Waxaa jiray aan rasmi ahayn taariikhda siideynta 'Jacaylku Waa Dagaal' Xilliga 3. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ognahay in dhacdo cusub OVA la sii daayay Maajo 19, 2021. Anime Kaguya Sama! waa mid aad loo jecel yahay iyo suurtogalnimada Kaguya Sama Xiliga 3 aad ayuu u sareeyaa. Tani waa sababta oo ah faa'iidada loogu talagalay la-qabsiga Anime waxay noqon doontaa mid aad u sarreeya, sidaas darteed ROI-gu wuu u qalmi lahaa.
Goorma ayaa la sii deyn doonaa Season 3?
CV wuxuu xusay in Xiliga koowaad laga bilaabay Japan Janaayo ilaa Maarso 2019 maqaalkeena haddii Kaguya Sama waxaa mudan daawasho wacan oo aad ka akhrisan karto halkan: https://cradleview.net/is-kaguya-sama-worth-watching, oo ay ku xigto xilli 2 bilaha Abriil iyo Juunyo 2020. Haddii wax-soo-saarka anime-ka la dejiyay (oo ay caadiyan yihiin) inay raacaan qaab isku mid ah, markaa waa inaan aragnaa xilliga 3 agagaarka bartamaha ilaa rubuci saddexaad ee 2021.
CV-gu wuxuu kaloo qiyaasayaa in haddii Kaguya Sama Xiliga 3 ma soo baxo 2021, markaas kii ugu dambeeyay waxaan waligey arki doonaa xilli kale oo ah Kaguya Sama Waxay noqon doontaa 2022. Si kastaba ha noqotee, warshadaha Anime waa mid aan la saadaalin karin oo ma xaqiijin karno runtii marka Xilliga 3 ee Kaguya Sama waa sii deyn doonaa, laakiin waxaan siinay jawaabta ugu macquulsan ee ku saleysan xaqiiqda la hayo.
Salaan kama dambays ah oo ku saabsan Kaguya Sama Season 3
Kaguya Sama waa Anime aad loo jecel yahay oo soo baxay 2019. 2 Season ka dibna la raacay 2020 oo si weyn loo soo dhaweeyay. Fursadaha a 2 Season aad bay u sarreeyaan, rabitaanka iyo baahida taageerayaashuna waa ay had iyo jeer joogaan. Waxaa laga yaabaa in muddo ah hoos u dhaca khadka laakiin ku dhawaaqida rasmiga ah ayaa ku dhow geeska Kaguya Sama Xilliga 3.
Kaliya waa inaad diyaar u ahaataa inaad dhageysato. Waxaad la socon kartaa dhammaan wararkii ugu dambeeyay iyo maqaallada ku saabsan Anime iyo in ka badan, adiga oo iska diiwaangelinaya liiska boostada ee hoose:
Gelitaan Hore Shiinaha ayaa soo sheegay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka shimbiraha ee H10N3
Gelitaanka Xiga Weerarkii Titan Season 3 ee dhammaanaya waa qurux